The Ab Presents Nepal » यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल (असार २ गतेदेखि ८ गतेसम्म) शुभ साता!
यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल (असार २ गतेदेखि ८ गतेसम्म) शुभ साता!
साप्ताहिक राशिफल : तपाइको यो साता कति राम्रो, कति नराम्रो ?
तपाईंका लागि यो साता अनुकूल छ । भोलि आइतबार शुभ नभए पनि बाँकी सबै दिन शुभ फल दिनेवाला छन् । थालनी गरिएका कार्यहरु प्रायः सफल हुनेछन् । नयाँ जोशजाँगर, सोच, इच्छा जागृत हुनेछ । रोजगार, वैदेशिक यात्रा, बढुवाजस्ता कुराहरुले प्राथमिकता पाउनेछन् । आम्दानीको सम्भावना छ । इष्टमित्रबाट सहयोग पाइएला । मान–सम्मान, पुरस्कार प्राप्तिको सम्भावना छ ।
शुभ अंक – ३ , ५
शुभ रंग – हरियो , रातो
शुभ अंक – ६ , ९
शुभ रंग – सेतो , वैजनी
शुभ रंग – हरियो , पहेँलो
शुभ अंक – २ , ९
शुभ रंग – सेतोे , पहेँलो
तपाईंका लागि यो साता शुभ फलदायक छ । शुभ मांगलिक कामको थालनी हुनेछ । प्रायजसो सबै कार्यहरु सफल हुनेछन् । रोजगार, वैदेशिक यात्रा, बढुवा, आम्दानीको सम्भावना छ । परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्रबाट सहयोग पाइएला । गरिरहेको पेसाबाट राम्रै आम्दानी हुने देखिन्छ । सबैको वाहवाही भइनेछ । मान–सम्मान बढ्नेछ । तर भोलि आइतबार भने त्यति राम्रो समय छैन ।
शुभ अंक – १ , ५
शुभ रंग – रातोे
शुभ अंक – ४ , ८
शुभ रंग – घिउ
शुभ अंक – ३ , ७
शुभ रंग – सेतो
शुभ अंक – ५ , ९
शुभ रंग – रातो , पहेँलो
तपाईंका लागि यो साता शुभ फलदायक छ । रोजगार, वैदेशिक यात्रा, बढुवा, सम्पत्ति वृद्धिको सम्भावना छ । शुभ मांगलिक काम होला । व्यापार व्यवसाय वा आफ्नो पेसाबाट राम्रै आम्दानी हुने देखिन्छ । आँटेका कार्यहरु सफल हुनेछन् । परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्रबाट सहयोग पाइएला । शुभ समयले गर्दा मान–सम्मान बढ्ला । तर आइतबार भने समय त्यति राम्रो छैन ।
शुभ अंक – ५ , ८
शुभ रंग – सुन्तला
शुभ अंक – १ , ६
शुभ रंग – सुन्तला , कालो
तपाईंका लागि यो साता उपलब्धिमूलक नै देखिन्छ । विविध वस्तु वा सेवा प्राप्ति होला । कार्य सफल हुनाले मन आनन्दित होला । राजनीतिकर्मीबाट फाइदा लिन सकिने देखिन्छ । स्वस्थता एवम् आनन्दको अनुभूति होला । धेरथोर आर्थिक लाभ पनि हुनसक्छ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । तर बिहीबार र शुक्रबार भने केही चिन्ता होला । कार्य बाधा, स्वास्थ्यमा गडबड हुनसक्छ ।
शुभ रंग – कलेजी
तपाईंका लागि यो हप्ता सुख–समृद्धिदायक छ । राज्यद्वारा दिइने सेवा–सुविधा प्राप्त हुने, राजनीतिक सक्रियता बढ्ने, व्यापार–व्यवसायमा लागेकाहरुलाई यथेष्ट फाइदा हुने, शारीरिक एवम् मानसिकरुपमा स्वस्थ भइनेछ । त्यस्तै बोलीबचनमा सरस्वती बस्नाले बोलेको लाग्ने, आर्थिक लाभ हुनाले व्ययभार थेग्न सहज हुने, सुख–सन्तोष हुनेछ । तर आज शनिबार भने केही अस्वस्थता र तनाव होला ।
शुभ अंक – ४ , ७
शुभ रंग – पहेँलो , रातो